ဘယျသူမှမတိုကျတှနျးဘဲလဖွေတျနတေဲ့ အတနျးဖျောကို ပွုစုပေးနတေဲ့ မူလတနျးကလေး၂ယောကျ
Yuan နဲ့ Karl
ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျလ ၂၅ရကျနတေု့နျးက Cristine Lopez (Tin-tin Lopez) ဆိုတဲ့ facebook အကောငျ့က တငျခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျတဈခုပွနျ့နှံ့ခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုငျဟာ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ၊ Pampanga ပွညျနယျ၊ Mabalacat မွို့ မှာရှိတဲ့ မူလတနျးကြောငျးတဈကြောငျးကကြောငျးသား ၃ယောကျရဲ့ အဖွဈအပကျြလေးကို ရိုကျကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုငျကိုတော့ အတနျးပိုငျဆရာမကိုယျတိုငျ ရိုကျကူးပွီး facebook ပျေါမှာ ပွနျလညျမြှဝပေေးခဲ့တာပါ။
ထို ဗီဒီယိုဖိုငျထဲမှာ မူလတနျးကြောငျးသားနှဈဦးဖွဈတဲ့ Yuan နဲ့ Karl ဟာ Cerebral Palsy ဝဒေနာခံစားနရေတဲ့ အတနျးဖျောတဈဦးကို ညီအဈကိုရငျးခြာတှကေို သခြောပွုစုပေးနတောပဲဖွဈပါတယျ။ Cerebral Palsy ရောဂါဟာ မီးမဖှားခငျ ဒါမှမဟုတျ မီးဖှားပွီးအခြိနျမှာခြို့ယှငျးမှုတဈခုခုကွောငျ့ ဦးနှောကျထိခိုကျပွီး လဖွေတျတဲ့ ဝဒေနာ ခံစားရတဲ့ ရောဂါတဈမြိုးပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ Yuan နဲ့ Karl ဟာ သနားပွီး အကူအညီပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ထူးခွားတာက သူတို့နှဈယောကျကို ဘယျဆရာမကမှ ကူညီဖို့ တိုကျတှနျးပွောဆိုခငျြးမရှိဘဲ သူတို့အသိစိတျဓာတျနဲ့ သူတို့ ကူညီနကွေတာဖွဈပါတယျ။ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Yuan က ရောဂါခံစားနရေတဲ့ အတနျးဖျောကောငျလေးကို သူ့ဆီမှာပါလာတဲ့ မုနျ့ကို ခှံ့ကြှေးနပွေီး Karl ကတော့ ပူနမှောဆိုလို့ပနျကာကိုယူပွီး ကွမျးပွငျပျေါမှာ ဖှငျ့ပေးနတောပဲဖွဈပါတယျ။
God bless these kids. ??
Gepostet von Tin-tin Lopez am Montag, 24. Juni 2019
Inquirer.Web သတငျးဌာနတဈခုရဲ့ အဆိုအရ Yuan နဲ့ Karl ဟာ ဇှနျလ ၃ရကျနေ့ ကြောငျးပထမဦးဆုံးတကျတဲ့နမှေ့ာပဲ အဆိုပါ အတနျးဖျောကိုမွငျပွီး သူ့အတှကျ အစာစားတဲ့အခါနဲ့ စာရေးတဲ့အခါမှာ ကူညီပေးပါရစဆေိုပွီး ဆရာမဆီမှာ ခှငျ့ပွုခကျြတောငျးခဲ့ဖူးပါတယျ။ အခုခြိနျမှာ တော့ အဆိုပါ ဗီဒီယိုကို ကွညျ့ရှု့သူ ၁သနျး၆သောငျးကြျောနဲ့ မြှဝပေေးသူ ၃သောငျး ၇ထောငျကြျော ရှိနပေါတယျ။
ဘယ်သူမှ မတိုက်တွန်းဘဲ လေဖြတ်နေတဲ့ အတန်းဖော်ကို ပြုစုပေးနေတဲ့ မူလတန်း ကလေး၂ယောက်
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၅ရက်နေ့တုန်းက Cristine Lopez (Tin-tin Lopez) ဆိုတဲ့ facebook အကောင့်က တင်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ Pampanga ပြည်နယ်၊ Mabalacat မြို့ မှာရှိတဲ့ မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကကျောင်းသား ၃ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့ အတန်းပိုင်ဆရာမကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးပြီး facebook ပေါ်မှာ ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့တာပါ။
ထို ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ မူလတန်းကျောင်းသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Yuan နဲ့ Karl ဟာ Cerebral Palsy ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ အတန်းဖော်တစ်ဦးကို ညီအစ်ကိုရင်းချာတွေကို သေချာပြုစုပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cerebral Palsy ရောဂါဟာ မီးမဖွားခင် ဒါမှမဟုတ် မီးဖွားပြီးအချိန်မှာချို့ယွင်းမှုတစ်ခုခုကြောင့် ဦးနှောက်ထိခိုက်ပြီး လေဖြတ်တဲ့ ဝေဒနာ ခံစားရတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ ဒါ့ကြောင့် Yuan နဲ့ Karl ဟာ သနားပြီး အကူအညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားတာက သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဘယ်ဆရာမကမှ ကူညီဖို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုချင်းမရှိဘဲ သူတို့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ သူတို့ ကူညီနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ Yuan က ရောဂါခံစားနေရတဲ့ အတန်းဖော်ကောင်လေးကို သူ့ဆီမှာပါလာတဲ့ မုန့်ကို ခွံ့ကျွေးနေပြီး Karl ကတော့ ပူနေမှာဆိုလို့ပန်ကာကိုယူပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဖွင့်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Inquirer.Web သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ အဆိုအရ Yuan နဲ့ Karl ဟာ ဇွန်လ ၃ရက်နေ့ ကျောင်းပထမဦးဆုံးတက်တဲ့နေ့မှာပဲ အဆိုပါ အတန်းဖော်ကိုမြင်ပြီး သူ့အတွက် အစာစားတဲ့အခါနဲ့ စာရေးတဲ့အခါမှာ ကူညီပေးပါရစေဆိုပြီး ဆရာမဆီမှာ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုချိန်မှာ တော့ အဆိုပါ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှု့သူ ၁သန်း၆သောင်းကျော်နဲ့ မျှဝေပေးသူ ၃သောင်း ၇ထောင်ကျော် ရှိနေပါတယ်။